Xaqiiqda qarsoon ee guul darada Xisbiga Wadani.
Xaqiiqda qarsoon ee guul darada Xisbiga Wadani.
Monday December 11, 2017 - 14:12:58 in by Samiir Cabdi
Xaqiiqda qarsoon ee guul darada Xisbiga Wadani. waxa igu kalifay in aan qoro maqaalkan iftiimin aan doonayo in aan ku saxo qaladaadka uu sameeyey xisbiga Wadani, si waayo aragnimo looga helo doorashooyinka
waxa igu kalifay in aan qoro maqaalkan iftiimin aan doonayo in aan ku saxo qaladaadka uu sameeyey xisbiga Wadani, si waayo aragnimo looga helo doorashooyinka danbe ee soo socda..
Wadani wuxuu ahaaXisbi muddo yar oo gaaban jiray meel wanaagsna soo gaadhay muhiim maaha in la badiyo marka koowaad, aalaaba wey iska dhacdaa in xisbi 5 sano jir ah si fudud looga guuleysan karo.
Maxaa sababay in laga guuleysto wadani?
afeef sababaha aan so qori doono waxa ku jira magacyo qabaail fadlan lo arkin dhinaca xumaanta ah kaliya waa in aynu waaqici noqonaa si aan loo galin qaladaad danbe.
Xisbiga Wadani wuxuu ku xisaabtamay cod aad u badan oo beesha h.yoonis ah.laakiin taasi ma dhicin badalkeed waxaa dhacday in tiro aad u yar ay keentay beesha h.yoonis. tusaale h.yoonis codkiiTogdheer waa sidan: 45604 cod.. H.jeclo togdheer wadani 10988 cod, cabdale Arab wadani 3012 codtirada guud Wadani togdheer ka helay waa 59604 cod. Sanaag,Beesha h.yoonis Gobolka Sanaag: 21100 cod . H.jeclo wadani 3100 , Harti wadani 4577tirada guud wadani ka helaysanaag waa 28777 cod.
Beesha Arab oo xisbiga wadani ka filayey cod ku dhow ilaa 50 kuncod ayaa siisay wadani cod dhan19 kun kaliya.
beesha makaahiil samaroon oo laga filayey tiro badan ayaa iyana sidii la moodayay noqon weyday.
Xisbiga wadani waxaa ku yaraa siyaasiyiinta miisaanka leh ee kasban kara beelahooda, ciyaal ku cusub saaxada siyaasada ayaa lagu aaminay shaqadii xisbiga.
Xisbiga wadani waxa jabiyey siyaasiyiin ay isku beel ahaayeen muuse biixi oo kaambeyn ka dhigtay aflagaadada muuse biixi taana waxa ka faaiiday xisbiga kulmiye..
ismaaciil buubaa oo ku ololeeyey magaca garxajis. hadii xisbi qabiil ku ololeeyo si toos ah ogoow xisbigii kale qabiil bu noqonayaa taageerayaal badan oo muuse beshiisa ahaa oo aan jecleyn xisbiga kulmiye ayaa qabyaaladdaina buubaa ku qasabtay inay u codeeyaan muuse
dad badanoo dhex dhexaad ahaa ayaa wadani ka codeeyey iyagoo ku qanci waayay hogaaminta Cirro.
Dekedda berbera iyo Dp oo xisbiga wadani siyaasad qaldan ka qaatay, taasina waxay kaliftay in dawlado shisheeye ka so horjeestaan xisbiga. xisbiga wadani waxaan u rajaynaya in uu ku cibro qaato qaladaadkii hore u dhacay, shaki kuma jiro in uu Wadani kursiga heli doono mar uun laakiin taa waxay ku xidhan tahay isbadal lagu sameeyo xisbiga gaar ahaan musharaxa xisbiga waa in uu ahaadaa nin shaqsiyan karaamo iyo magac ku leh bulshada dhexdeeda, siyaasi culus ah kaasoo lagu aamini karo masiirka dalka.
by aadam haashi